अर्नोन राडथोंगको छोरी कार्न्सिता सँग बिहे गर्नेलाई इनाम स्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड’ तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस – Khabar PatrikaNp
अर्नोन राडथोंगको छोरी कार्न्सिता सँग बिहे गर्नेलाई इनाम स्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड’ तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस
August 16, 2020 324
कुनै पनि बुबा आमा आफ्नो सन्तानको बिवाह भन्ने बित्तिकै उत्साहित नहुने त कुरै भएन् । बुवा आमाको सपना नै हुन्छ । आफ्नो छोरीहरुलाई राम्रो लाएकको केटा संग बिवाह गरिदिने । अनि उनिहरुको विवाहमा आफ्नो गक्षले दा’ईजो दिने । यस्तैमा आज हामी तपाईहरुलाई यस्तै बिवाहको अनि दाईजोको बारेमा जानकारी दिन गईरहेका छौं । जुन अलि अनौठो रहेको छ ।
थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले छोरीको बिहे गराउनका लागि अनौठो घोषणा गरेका छन् । अर्नोन राडथोंग नामक ती धनाढ्य व्यापारीले आफ्नी कुमारी छोरी कार्न्सिता सँग बिहे गर्नेलाई इनाम स्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड ‘झण्डै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ’ दिने घोषणा गरेका हुन् । तर ती व्यापारीले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पहिलो सर्त ‘केटा स्मार्ट हुन जरुरी नभए पनि पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्ने’ । दोस्रो केटा मेहनती तथा लगनशील हुनुपर्ने । तेस्रो केटा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुनुपर्ने । २६ बर्षीय कर्निताले स्नातक तहसम्म पढेकी छिन् । उनी चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्नमा सक्षम रहेको बुबाको दावी छ । ति ब्यक्ति एक कृषि फार्मकोमालिक रहेको बताईएको छ
थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले छोरीको बिहे गराउनका लागि अनौठो घोषणा गरेका छन् । अर्नोन राडथोंग नामक ती धनाढ्य व्यापारीले आफ्नी कुमारी छोरी कार्न्सिता सँग बिहे गर्नेलाई इनाम स्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड ‘झण्डै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ’ दिने घोषणा गरेका हुन् । तर ती व्यापारीले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पहिलो सर्त ‘केटा स्मार्ट हुन जरुरी नभए पनि पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्ने’ । दोस्रो केटा मेहनती तथा लगनशील हुनुपर्ने । तेस्रो केटा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुनुपर्ने । २६ बर्षीय कर्निताले स्नातक तहसम्म पढेकी छिन् । उनी चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्नमा सक्षम रहेको बुबाको दावी छ । ति ब्यक्ति एक कृषि फार्मको मालिक रहेको बताईएको छ ।
Prevउपत्यकामा हालसम्म १ हजार ७ सय ९५ जनामा संक्रमण पुष्टि
Nextकालिकोटको महावै गाउँपालिका–मा गएराति गएको पहिरोमा परी ६ जनाको मृत्यु गाउनै आशुमा डुबेर सा’मुहिक अ’न्त्य ।
नेपालमा मंगलबार बिहानै ५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि कुन जिल्लामा थपिए संक्रमित? (सूचीसहित)
सुपरस्टार अजय देवगनका भाइ अनिल देवगनको निधन
आजअसोज महिनाको पहिलो दिन, कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल !